5 amarekhodi ephulwe yisiphepho uMathewu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISiphepho uMathewu siye sahlasela kulezi zinsuku ezimbalwa zokugcina ngendlela ebhubhisayo futhi njengoba lonke ugu olusempumalanga ye-United States lwalungakaze lubonwe isikhathi eside.
Kuyisiphepho ukuthi ngesonto elilodwa ukwazile ukwephula amarekhodi ama-5 futhi lokho kuye kwaholela ekulahlekelweni okuningi kokubili ezingeni lomuntu siqu kanye nezinto ezibonakalayo okuzoba nzima ukuzilungisa isikhathi eside.
Kuyisiphepho esaphila isikhathi eside ngo-Okthoba endaweni yase-Atlantic. Kuze kube manje, irekhodi beliphethwe yiSiphepho u-Ivan, esenze ukuwa komhlaba ngonyaka we-2004 futhi sasinezinsuku eziyi-10 ubudala. Kwase kuyiminyaka eyi-9 selokhu umcengezi wase-Atlantic wahlupheka futhi wahlaselwa yisiphepho seSigaba 5.
Isiphepho uMatthew yisiphepho sokuqala soMkhakha 4 ukuwa eHaiti eminyakeni engaba ngu-52. Irekhodi laphambilini laliyisiphepho uCleo ngo-1964. Lesi siphepho esokuqala siqoshwe ukuthi senze ukuwa okukhulu eCuba, eHaiti naseThe Bahamas.
ISiphepho uMatthew esaqala ngoSepthemba 29, yisiphepho eside kakhulu esigabeni 4 0 5 emlandweni kuyo yonke indawo esempumalanga yeCaribbean. Lawa amanye amarekhodi iSiphepho uMatewu esihlaba umxhwele esiye sawaphula kulo lonke ichibi lase-Atlantic. Namuhla kunezinkulungwane ezife ngenxa yalesi siphepho esihlaba umxhwele esesicekele phansi izindawo zaseHaiti, eCuba naseMelika. Ezinsukwini zamuva nje, lesi siphepho sesiphenduke isiphepho sangemva kwezindawo ezishisayo, esilahlekelwa yingxenye yamandla aso. Ngaphandle kwesibalo sabantu abashonile, kunezigidi zabantu abasele bengenandawo yokuhlala futhi belahlekelwe kaningi ngokwezinto ezibonakalayo. Ngaphandle kokungabaza, iSiphepho uMatthew sibe ngesinye sezilimaza kakhulu eminyakeni yamuva.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » 5 amarekhodi asethwe iSiphepho uMatthew